Android inofamba ichienda kuBazel kuvaka system | Linux Vakapindwa muropa
Android inofamba ichienda kuBazel kuvaka system
Vagadziri veGoogle vari kumashure kwekusimudzira kweApple, vakapa kuziva kuburikidza nechiziviso chekuti chirongwa chiri kufamba Android yakavhurwa sosi (AOSP) kushandisa iyo Bazel kuvaka system pachinzvimbo chezvino Soong, Ninja uye Gadzira compilation system.
Bazel rutsigiro rwakatowedzerwa kune Android repository, asi shanduko kune iyo nyowani yekuvaka system nekutadza se ichapararira pamhando dzakawanda chikuva chekuita kutama kuve nyore uye kujekesa sezvinobvira.
Muna 2020 na2021, hapana shanduko dzakakosha dzinotarisirwa mupuratifomu yekuvaka workflows, uye rutsigiro rwezviripo masisitimu ekuvaka achachengetedzwa.
Kubvumira zvishoma nezvishoma kutama, dzimwe shanduko kurerutsa Android inovaka dzakatoverengerwa muBazel, senge kugona kuongorora uye kumhanya Ninja-fomati yekuvaka mafaera.
Zvinopikiswa izvo zveiyo Android chikuva, kuchinjira kuBazel kuchawedzera kuchinjika kwekugadzirisa maitiro ekuvaka, Ichavandudza kusimudzira / kutarisa kwekufambira mberi kwekubatana uye kubatana kweanotsamira, kuitisa zvinodzokororwa kuvaka, kurerutsa zvinyorwa zvakaoma zvekuvaka, kugadzirisa kusangana pamwe kwakasiyana kuvaka uye kuyedza vanobata, uye kudzora kuvaka nguva.
Kuenda kuBazel kuchabvumira AOSP ku:
Ipa kumwe kuchinjika kumisikidza kusangana kweAOSP (zvirinani kutsigirwa kwemamiriro)
Rega kutarisisa kwakawanda paAOSP kuvaka fambiro mberi uye kutsamira
Ita kuti igone uye inogona kutamba (isina mvura) AOSP inovaka
Taura nzira yekumisikidza iyo inoderedza kuomarara kweAOSP inovaka
Ita kuti kumwe kubatanidzwa kwekuvaka nekuyedza zviitiko
Sanganisa zvese izvi kutyaira akakosha kuvaka nguva uye ruzivo kugadziridzwa
Zvakanakira kutama uku kuenda munharaunda yeBazel ndeiyi:
Kukosha kwekudyara kuri kuitika muBazel kutsigira Android chikuva inovaka
Bazel ecosystem uye nharaunda kuwedzera kusvika pekutanga inosanganisira makumi ezviuru evagadziri vepuratifomu yeApple uye Android foni zvigadzirwa zvekutanga zvigadzirwa (OEMs) uye chip vatengesi.
Mitemo yeBazel yeGoogle yekugadzira maapplication eApple ichave yakavhurwa sosi, inoshandiswa muAOSP, uye ichichengetwa neGoogle mukudyidzana nenharaunda yeAroid / Bazel.
Zvirinani Bazel kuenderana kwekugadzira Android maapp
Mutemo uri nani kutsigira mimwe mitauro inoshandiswa kuvaka iyo Android chikuva (Rust, Java, Python, Go, nezvimwewo)
Kutsigira kwakasimba kweBazel Yakareba Nguva Kutsigira (LTS) shanduro, zvichibatsira yakawedzera nharaunda yeBazel
Yakagadziridzwa zvinyorwa (tutorials uye chirevo)
Iyo ecosystem ye Bazel pa Android ichawedzera huwandu hwevatori vechikamu vanobatanidzwa mukusimudzira, icharerutsa iyo app kuvaka Android maapplication . inotungamira kune zvirinani uye zvakapamhama zvinyorwa.
Bazel inogadzirwa neGoogle mainjiniya uye inoshandiswa kuvaka mazhinji emakambani emukati mapurojekiti. Iyo purojekiti inomira pakumhanya kwayo kwakanyanya, iyo iyo caching matekiniki uye kuenzanisa kweiyo nzira yekuvaka inoshandiswa.
Maturusi zvakare chengetedza gungano rinodzokororwaMune mamwe mazwi, mhedzisiro yekuvaka iyo purojekiti pamushini wemugadziri ichave yakafanana chaizvo nekuvaka pane yechitatu-bato masisitimu, senge anoramba achibatanidza maseva. Kuwedzera mashandiro kunoitwa kuburikidza nemushini wekubatanidza ekuwedzera.
Kusiyana neMake neNinja, Bazel inotora nzira yepamusoro kugadzira mitemo yekuunganidza iyo, pachinzvimbo chekutsanangura kusungwa kwemirairo kune mafaera ari kunyorwa, shandisa zvimwe zvisingabvumirwe zvakavakirwa-zvakavakirwa uye kutsanangura chinangwa / kuvaka mapuratifomu.
Izvo zvikamu zveiyo purojekiti zvinotsanangurwa mu BUILD zvinyorwa faira muchimiro chepakeji yemaraibhurari, anoitisa uye bvunzo, pasina kudhindwa padanho remafaira ega uye mirairo yekudaidza compiler.
Mumafaira BUILD, kutsamira kwese kunofanirwa kutsanangurwa zvizere, pahwaro hwesarudzo dzinoitwa kuvakazve zvikamu mushure mekuita shanduko (mafaera chete akagadziridzwa anovakwazve) uye anoenzanisira maitiro ekuvaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Android inofamba ichienda kuBazel kuvaka system